Ihe ị ga-ahụ na Bilbao na gburugburu ya, karịa Guggenheim | Njem akụkọ
Kedu ihe ị ga-ahụ na Bilbao na gburugburu?
Louis Martinez | | nakwa na Bilbao, Getaways
ikekwe ị na-eche ihe ị ga-ahụ na Bilbao na gburugburu n'ihi na ị na-ahazi njem na Basque obodo. N'okwu a, ihe mbụ anyị kwesịrị igosi gị bụ na ọ gbanwere mgbanwe dị ukwuu n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya site n'ichepụta ihe. Uglọ ihe ngosi nka Guggenheim na ịrụ ọtụtụ akụrụngwa.
Mana nke a apụtaghị na Bilbao enwekwaghị mmasị n'ọdịnala ya. Nnọọ nso ya kasị oge a akụkụ ị ka nwere ike ịhụ Obodo Ochie, juputara na amara na ihe ncheta. Ọ bụrụ na ihe a niile ị gbakwunye gburugburu nwere ohere, yana ọmarịcha obodo ịkụ azụ dị ka Bermio o Lekeitio na eke jewel ka Gorbea Natural Park ị nwere ihe niile ịchọrọ ịnụ ụtọ ọnụnọ agaghị echefu echefu na obodo Basque. Mana, ka ị hazie nleta gị, anyị ga-akọwa nke ọma ihe ị ga-ahụ na Bilbao na gburugburu ya.
1 Kedu ihe ị ga-ahụ na Bilbao?
1.1 Old Town nke Bilbao
1.2 Uglọ ihe ngosi nka Guggenheim
1.3 Ụlọ Nzukọ Obodo na ihe owuwu obodo ndị ọzọ na Bilbao
1.4 Bridges nke Bilbao
2 Kedu ihe ị ga-ahụ gburugburu Bilbao?
2.1 Urdaibai Biosphere Reserve
Kedu ihe ị ga-ahụ na Bilbao?
Bilbao nwere ama egwuregwu San Mamés n'ihu
Anyị ga-amalite njem anyị nke obodo dị n'obodo ochie wee gosi gị ebe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị ị na-ekwesịghị ileghara anya. Ọ bụghị n'efu, anyị na-ekwu banyere a mepere emepe ihe karịrị narị ise square kilomita na ihe fọrọ nke nta ka otu nde bi.
Old Town nke Bilbao
A makwaara dị ka okporo ámá asaa, bụ ezigbo obi obodo, yana ụlọ ahịa ọdịnala ya na ọtụtụ ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-enye gị nri Basque mara mma. Ma, nke kachasị, ya na ihe ncheta ya dị egwu.
Anyị na-atụ aro ka ịmalite nleta gị na ụlọ ọrụ Katidral Santiago, ụlọ Gothic site na mmalite nke narị afọ nke XNUMX, ọ bụ ezie na isi ebe ịchụàjà bụ Renaissance. Ọzọkwa, ị nwere ezigbo nso Churchka nke San Anton, site n'otu oge na ụdị na-ewu ewu nke na ọ na-apụta ọbụna na uwe agha nke Bilbao. I kwesịghịkwa ichefu ụlọ arụsị ndị ọzọ mara mma n'obodo ahụ, n'agbanyeghị na ụfọdụ anọghịzi n'obodo ochie. Ọmụmaatụ, ụka nke San Francisco de Asís, San Nicolás, Obi dị Nsọ na San José de la Montaña.
Otú ọ dị, ikekwe ụlọ okpukpe kasị ama na Bilbao bụ Basilica nke anyị nwanyị nke Begoña, nke nwere ihe oyiyi nke onye nlekọta senti nke Vizcaya. Ewubere ya na narị afọ nke XNUMX, n'agbanyeghị na ọ were ihe karịrị otu narị afọ. N'ezie, a gbanwere ụdị Gothic mbụ, n'oge a na-ewu mkpuchi ya, site na ụdị Mannerist. N'otu aka ahụ, e weghachiri ya na njedebe nke narị afọ nke XNUMX na ebe ịchụàjà ya ugbu a bụ nke oge a, ọrụ neo-baroque site na. Modesto Echaniz.
N'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike ịga na ochie obodo Quelọ ihe nkiri Basque, nke ethnographic ọdịdị, na nke nkà mmụta ihe ochie. Mana, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka akụrụngwa ihe ngosi nka, enwere ndị ọzọ na Bilbao. Ọ bụ ikpe nke Lọ ihe nkiri nke Ọma Arts, nke nwere ihe nketa eserese pụtara ìhè, sitere na Ụlọ ihe ngosi nka, raara onwe ya nye ụwa mmiri mmiri na nke nwere Carola crane pụrụ iche, na, n'ezie, nke anyị ga-egosi gị ọzọ.
Uglọ ihe ngosi nka Guggenheim
Guggenheim Museum, ihe dị mkpa ịhụ na Bilbao na gburugburu
Ọ bụ otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya nke obodo ahụ. N'ezie, n'agbanyeghị na e hiwere ya na 1997, na ọdịdị ụgbọ mmiri ya pụrụ iche na ụda ọlaọcha ya, ọ ghọọlarị otu n'ime ya. akara. Ma ọ bụ nke ahụ, nke onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Canada mere Frank Gehry kwuru, Guggenheim bụ ihe ncheta nke oge a n'ihi ọdịdị mpụga ya.
Banyere ihe dị n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ọ na-abụkarị ụlọ nka nka. Ọ nwere nchịkọta ọrụ na-adịgide adịgide, kamakwa ihe ngosi nwa oge. Akụkụ nke mbụ etolite asaa colossal sculptures grouped n'okpuru aha nke Isi ihe nke oge. Ma, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka nnukwu ihe ọkpụkpụ, ọ dị mkpa ịkọwapụta ndị ị nwere ike ịhụ n'èzí ụlọ ahụ. N'ime ndị a, ikekwe ihe kachasị ama bụ nke nkịta Puppy, ọrụ nke Jeff Kohns.
Ụlọ Nzukọ Obodo na ihe owuwu obodo ndị ọzọ na Bilbao
Obodo Obodo Bilbao
Banyere ihe ị ga-ahụ na Bilbao na gburugburu, tupu ịkwaga na nke ikpeazụ, anyị ga-akwado ka ị gaa na nnukwu ụlọ ndị ọzọ na obodo Basque. Nke a bụ ọnọdụ nke ụlọ ahụ Ụlọ Nzukọ Alaeze, ụlọ mara mma n'ụdị eclectic, mana sitere na nke French Republic nke atọ.
Ma eleghị anya ọbụna ihe dị ịrịba ama bụ Ụlọ nke Chavarri Palace, nke dị na etiti Bilbao's Ensanche. Ewubere ya na njedebe nke narị afọ nke XNUMX n'ụdị ọkaibe, mana neo-Flemish nwere mmetụta dị ukwuu. N'ezie, ọrụ ahụ bụ onye Belgium na-ese ụkpụrụ ụlọ Paul Hanker.
N'otu aka ahụ, na Gran Vía ị ga-ahụ Obí nke Council Provincial nke Vizcaya, nke e wuru na njedebe nke narị afọ nke XNUMX ma dekwa ya n'ihe a na-akpọ Alfonsine eclecticism. N'okwu a, onye kere ya bụ Luis Aladren de Mendivil na n'ime ya nwere mgbidi abụọ nke onye na-ese Basque Jose Echenagusia Errazquin.
More ịdị umeala n'obi, ma dokwara nnọọ mma bụ Olavarri Palace. Ma, n'ihe banyere ụlọ ndị mara mma, akwụsịla inwe ekele nke Ramon de la Sota, dịkwa na Ensanche ma wuo ya na mmalite nke narị afọ nke XNUMX, nke bụ ihe atụ mara mma nke ihe owuwu nke neo-regionalist. Ma ị ga-ahụkwa Arróspide, Montero, Lezama-Leguizamón na Misericordia ụlọ. Ọ bụ ezie na ọ ga-achọ ịmatakwu ụlọ agụ, nke nwere ihe ọkpụkpụ nke nnukwu feline n'elu.
N'aka nke ọzọ, Bilbao nwere ụlọ ihe nkiri abụọ dị egwu. otu nke Champs Elysees bụ art Nouveau ọla mere site Alfredo Acebal, ọ bụ ezie na ịchọ mma nke facade ya bụ n'ihi French Jean-Baptiste Darroquy. N'otu oge ahụ (njedebe nke narị afọ nke XNUMX) bụ nke Ụlọ ihe nkiri Arriaga, a neo-baroque ewu n'ihi Joaquin de Rucoba. Na, n'agbanyeghị na ọ bụghịzi ụlọ ihe nkiri ma cha cha, anyị na-akwado ka ị hụ ụlọ ahụ Albian Coliseum, Ụlọ opera mbụ nke Bilbao.
Bridges nke Bilbao
The Biscay Bridge
N'otu aka ahụ, tupu ịhapụ Bilbao, anyị ga-agwa gị banyere àkwà mmiri ya. Ọ nwere ọtụtụ iji gafere Nervión estuary, ụfọdụ n'ime ha na-eju anya maka avant-garde ha. Ma ndị ọzọ tọrọ ma bụrụ ndị magburu onwe ha n'ezie. N'ime ndị ikpeazụ, ndị nke Council City, Deusto ma ọ bụ Arenal.
Mana nke ị ga-agarịrị ịga leta bụ Biscay Bridge, nke a makwaara dị ka àkwà mmiri nkwusioru nke Portugal. Emere ya na 1893 na, kemgbe 2006, ọ bụ saịtị ihe nketa ụwa. Ọ bụ àkwà mmiri na-ebu ibu. Site na ya ka e kokwasịrị ọtụtụ ụgbọ mmiri ndị na-agafe ọdụ ụgbọ mmiri n'ụzọ dị otú a ma nwee ike ịkwọ ụgbọ ala.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe Nervión na-ejikọta na Osimiri Cantabrian ma jikọta ọnụ Pọtụgalet, na ya ochie n'okporo ámá, na Getxo, ya na ọmarịcha ụlọ ya. Mana nke a na-eduga anyị ikwu maka ihe anyị ga-ahụ gburugburu Bilbao.
Kedu ihe ị ga-ahụ gburugburu Bilbao?
Obodo mara mma nke Bermeo
Tinyere obodo abụọ ahụ anyị kwuburu okwu ya, ị nwere ọtụtụ ọmarịcha obodo ndị ọzọ dị gburugburu Bilbao, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile raara nye ịkụ azụ̀ kemgbe oge ochie. Nke a bụ ikpe nke ndị a kpọtụrụ aha Bermio, nke San Juan de Gaztelugache bụ nke, nke anyị ga-ekwu maka ọzọ; si Mundaka, na ya mara mma hermitage nke Santa Catalina, ma ọ bụ nke Guernica, ebe Mgbakọ General nke Vizcaya zutere n'ụkwụ osisi oak ya a ma ama. Ma, na mgbakwunye, obodo ndị a niile bụ nke ọla okike nke anyị ga-agwa gị.
Marshes nke Osimiri Oka, na Urdaibai Biosphere Reserve
Ihe ịtụnanya a nke okike bụ otu n'ime ihe ị ga-ahụ na Bilbao na gburugburu ya. Central axis bụ oke osimiri, nke a mụrụ na Ugwu Oíz na ọ na-aghọ estuary mgbe ọ ruru, kpomkwem, Mundaka, ebe ọ na-etolite adọrọ mmasị steepụ.
Na mgbakwunye, ọ bụ mpaghara pụrụ iche maka ikiri nnụnụ na-enye gị ọmarịcha osimiri dị ka nke Laga, n'akụkụ oké nkume Ogoño, ma ọ bụ nke laida, zuru oke maka gị ịme sọfụ. Mana ọ na-enyekwa gị ihe ncheta. Dịka ọmụmaatụ, ihe dị egwu Ụlọ nke Arteaga, ihe owuwu ọhụrụ nke narị afọ nke XNUMX wuru n'aha eze nwanyị Eugenie de Montijo.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ụdị ihe owuwu a, ikekwe na nnukwu ụlọ nche, ebe e wusiri ike neo-Gothic wuru na narị afọ nke XNUMX, n'agbanyeghị na mmalite ya bụ oge ochie, nke dị nso na ọmarịcha obodo. Ọtụtụ. Ọzọkwa, na-alaghachi na Urdaibai, anyị na-adụ ọdụ ka ị na-ahụ Ozollo tide igwe ihe, malitere na XVII.
N'aka nke ọzọ, na Bermeo ị nwere nnukwu ihe Ụlọ elu nke Ercilla, site na njedebe nke XV, na Gothic Church nke Santa Eufemia na ebe obibi ndị nọn na ụlọ nsọ San Francisco; en Mba ụka San Martín de Tours; na Rigoitia nke Santa María de Idibaltzaga na in busturia Torre Madariaga, nke e wuru na mmalite nke narị afọ nke XNUMX. Ihe a niile na-echefughị Oma Animated Forest, onye osisi ya na-acha Agustin de Ibarrola na Ọgba Santimamine, ya na ihe osise ọgbara ọhụrụ ya.
Echiche nke San Juan de Gaztelugache
Dị ka anyị gwara gị na mbụ, anyị ga-agwa gị ihe ị ga-ahụ na Bilbao na gburugburu ebe a dị ịtụnanya nke Basque dị n'etiti Bermeo na Laika. Kechie na a akụkọ ifo ikuku nke pirates na ọgbụgba ndụ, San Juan de Gaztelugache bụ otu nkume nke ejikọtara n'ụsọ oké osimiri site na akwa nkume na nzọụkwụ 241.
Na ya ị nwere ọmarịcha hermitage nke ị nwere ike tinye ụkwụ gị n'ụkwụ aka ekpe n'ebe ahụ, dịka akụkọ akụkọ si kwuo, Saint John Baptist. Ma ọ bụghị nanị akụkọ ifo nke ebe ahụ. A na-ekwu na maka ihu ọma ị ga-akụ mgbịrịgba ụlọ nsọ ugboro atọ.
N'ikpeazụ, anyị egosila gị ụfọdụ ihe Ihe ị ga-ahụ na Bilbao na gburugburu. Mana, n'enweghị mgbagha, anyị ahapụla ụfọdụ ebe na pipeline. Dịka ọmụmaatụ, obere obodo lekeithium, otu n'ime ndị kasị mma na Basque Coast. Ma ọ bụ Gorbea Natural Park, ebe bụ nnukwu Beech ọhịa nke Otzarreta. Na ihe ndị a niile, ị naghị eche na Vizcaya kwesịrị ịbịbịa gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » nakwa na Bilbao » Kedu ihe ị ga-ahụ na Bilbao na gburugburu?
Ihe kacha mma ị ga-eji gaa United States n'oge okpomọkụ